Priyanka Chopra Iyo Karan Johar Oo Ku Kaftameen In Ranbir Kapoor Nolol Cusub Sameestay - Hablaha Media Network
Priyanka Chopra Iyo Karan Johar Oo Ku Kaftameen In Ranbir Kapoor Nolol Cusub Sameestay
HMN:- Atirishada caanka ah Priyanka Chopra ayaa kasoo muuqatay xalqadii ugu dambeesay barnaamijka Koffee With Karan Season 5 ee uu Karan Johar xariiriye ka yahay.
Hadaba Priyanka iyo Karan Johar ayaa ku kaftameen inta uu bandhiga Koffee With Karan socday in Ranbir Kapoor nolol cusub sameestay.
Qof walbo ayaa la socdo in horaantii sanadka h--e Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif kala hareen sidoo kalena Ranbir uu dhawaanahan nolosha kali ku yahay.
Hadaba Karan iyo Priyanka inta ay sheekada Koffee With Karan ku guda jireen Karan Johar ayaa soo hadal qaaday arimo Ranbir ku aaday wuxuuna Priyanka ku yiri “Saaxiibkaa Ranbir beryahan xaaladiisa maka warqabtaa”
Waxay Priyanka ku jawaabtay “Haa si wacan ayaan iskula soconaa sidoo kalena xog walbo oo ku saabsan waan helaa ama waan raadiyaa”
Karan Johar wuxuu Priyanka ku yiri “Ranbir waxaan ogaa asigoo nolosha kali ku ah, balse hada ama saaxiib cusub yeeshay?”
Priyanka wey is celin weesay waxayna dhahday “Haa waan la socdaa in Ranbir Kapoor nolol cusub sameestay, laakiin Karan adigaa sheekadan qolka Make Up-ka iigu sheegtay!”
Karan Johar wajigiisa ayaa is badal markii sheekada lagu gadiyay wuxuuna yiri “Maya maya waxaas waxba kama jiraan Ranbir Kapoor weli nolosha kali ayuu ku yahay”
Dabcan Karan wuxuu rabay inuu Priyanka ka hoos bixiyo balse isaga ayay sheekada kaftanka ahayd ku gadisay…..